Shaybaadhka qaranka SKL oo la dhaleeceeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Yvonne Åsell / SvD / SCANPIX
Shaybaadhka qaranka SKL oo la dhaleeceeyay
La daabacay tisdag 29 maj 2012 kl 12.57
Hayada Macluumaadka ee Datainspektionen ayaa dhaleeco korka uga tuurtay shaybaadhka qaranka SKL, kadib markii ay sameeyeen sanduuq ka mida kuwa lagu keydiyo macluumadka la xidhiidha DNA.
Dhaleecadan ayaa salka ku haysa sanduuq ka mida kuwa lagu kaydiyo dheecaanka iyo macluumaadka la xidhiidha dadka, siiba DNA laga qaado meelaha ay dambiyadu ka dhacaan kuwaaso lagu dhex qaldo kuwa ka hawl gala hayadaas qaranka ee shaybaadhka.
Sanduuqan macluumaadku ku jiro ayaa waxa laga helaya dheecaanka DNA ilaa 500 oo qof oo iyagu si iska wax u qabso ah u dhigay shaybaadhkan qaranka, halka qaar ka mid ahi ay ka shaqeeyaan isla shaybaadhkaas iyo dadyoow kale oo birifaad ah.
Sida ay sheegayso hayada macluumaadku ayaanay jirin wax sharci ah oo ku cad sharciga bileyska qaybtiisa keydinta macluumaadka ee diwaan galinta shaybaadka qaranka SKL. Taaso ah ta afraad marka laga reebo saddexda ay bileysku haystaan.